E-Business अर्थात् अनलाइन बिजनेश - E Net Nepal
Home E-Business E-Business अर्थात् अनलाइन बिजनेश
E-Business अर्थात् अनलाइन बिजनेश
E NET NEPAL 9:53 PM E-Business,
के तपाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्ने बिचारमा हुनुहुन्छ ? के तपाईसंग व्यवसाय सुरु गर्न पर्याप्त पूंजी छैन ? त्यसो भए इ-बिजनेश तपाईको लागि उपयुक्त बिजनेश हुन सक्छ । यहाँ हामी इ-बिजनेशका बारेमा केहि चर्चा गर्नेछौं ।
आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्नु तपाईका निमित्त रोमाञ्चक त हुन सक्छ साथसाथै तपाईका लागि अवसर र खतरा दुवै हुन सक्छ । सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडी तपाईले आफ्नो व्यवसायमा गर्न सक्ने लगानी समय र पूंजी दुबैको बारेमा स्पष्ट हुनुका साथै तपाईको व्यवसायमा संलग्न हुने वा हुनसक्ने विभिन्न पाटोहरुको बारेमा पनि केहि जानकारी लिन सक्नुहुन्छ भने अझ राम्रो । तपाईको समय र पैसा दुवै चिजको लगानी उचित योजनामा गर्दा नै तपाइको बिजनेश सफल हुन सक्छ ।
बिना कुनै लगानी वा सानो लगानीमा बिजनेश गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि अनलाइन बिजनेश उपयुक्त हुनसक्छ । घरमा नै बसेर सानो लगानी गरेर वा कुनै लगानी नै नगरी काम गर्न सकिने भएकोले पनि अचेल युवा जमातको माझमा अनलाइन बिजनेश चर्चाको बिषय बन्ने गरेको छ । अझ कतिपय व्यक्ति तथा संस्थाले त अनलाइन बिजनेशको ट्रेनिंग दिनकै लागि भनेर निश्चित रकम लिएर कोर्स नै पनि संचालन गर्ने गरेका छन् ।
के हो त इ-बिजनेश ?
अनलाइन बिजनेश अर्थात् इ-बिजनेश भन्नाले अनलाइनमार्फत गरिने अर्थात् इन्टरनेटको प्रयोग गरेर गरिने कारोबार वा बिजनेशलाई बुझिन्छ । ति व्यक्ति जसले आफ्नो बिजनेशको कुनै वा सबै कारोबार वा कार्य इन्टरनेटको प्रयोग गरेर गर्दछन भने तिनीहरुले अनलाइन बिजनेश गरिरहेका हुन्छन ।
कसरि सुरु गर्ने त इ-बिजनेश ?
इ-बिजनेश सुरु गर्न सबैभन्दा पहिला त तपाई कम्प्युटर र इन्टरनेटसंग राम्ररी परिचित हुनु जरुरि छ । यदि तपाई इन्टरनेट चलाउन अभ्यस्त हुनुहुन्न भने तपाईले इ-बिजनेश गर्नु भन्दा पहिला इन्टरनेटमा अभ्यस्त हुनै पर्छ । त्यसपछि तपाईको दक्षताअनुसारको अर्थात् तपाइलाई जानकारी भएको क्षेत्रको कार्य सुरु गर्न सक्नुहुन्छ । यसरि काम गर्नको लागि तपाई सानो लगानीमा आफ्नै वेबसाइट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ भने धेरै राम्रो अन्यथा तपाई फ्रील्यान्सिंग साइटहरुमा एकाउन्ट बनाएर काम सुरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ । अर्को विकल्प भनेको तपाई ब्लगिंग सुरु गर्न पनि सक्नुहुन्छ जसका निमित्त तपाईले फ्री एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ । तपाईलाई फ्रील्यान्सिंगका कामहरु गर्न आउदैन र ब्लगिंग गर्न पनि झंजट लाग्छ भने तपाई अफिलिएट प्रोग्राममार्फत पनि अनलाइन बिजनेश गरेर आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ ।
Tags # E-Business
By E NET NEPAL at 9:53 PM